ရဲကိုကိုများရဲ့ တလွဲလုပ်ရပ်တွေအတွက် တာဝန်ယူဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို - Myannewsmedia
ရဲကိုကိုများရဲ့ တလွဲလုပ်ရပ်တွေအတွက် တာဝန်ယူဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
October 9, 2019 October 9, 2019 admin	0 Comments
အများကချစ်ကြတဲ့ မမပန်ဆယ်လိုကတော့ ဖြိုးပြည့်စုံတို့ ရောင်းရင်းတွေဖမ်းဆီးခံရခြင်းအ တွက် ချက်ကျလက်ကျ ရေးသားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မမပန်က “အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံပါ သုံးဦးကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့။ ဖမ်းမိတဲ့ဆေးပြားတွေက မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်လို့ ဓါတုဗေဒဝန်ရုံးက ပြန်ကြားပါသတဲ့….
လွတ်မြောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ မေးစရာ မေးခွန်းတွေ ရှိလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြစ်ရှိတယ် မရှိဘူး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဟုတ်မဟုတ် မသေချာဘဲ သတင်းအရဆိုတာနဲ့ လူကြားသူကြားထဲ သောက်ခွက်ရိုက်ပြီး ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့… အဲ့ကိစ္စကို ရှင်းပြပါ။
၁)လူမြင်ကွင်းမှာ ဖမ်းဆီးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်ပုတ်ခေါ်ဆောင်ခြင်း
၂)မူးယစ်ဆေးဟုတ်မဟုတ် မသေချာဘဲ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပုဒ်မအပါအဝင် ပုဒ်မတွေတပ်ခြင်း
ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူက တာဝန်ယူမလဲ၊ ဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲ။ မှားဖမ်းတာ… ဆောရီးနော်ဆိုတာနဲ့ ရမလား…
အခုကိစ္စက နာမည်ကြီး အဆိုတော်ဖြစ်နေလို့သာ Candy က Candy ဖြစ်တာ။ ဒါတောင် အစက ကက်တမင်းဆေးပြားလို့ သတင်းတက်သေးတယ်။ အကယ်၍ ဖြိုးပြည့်စုံနေရာမှာ သာမန်မျက်နှာမွဲ လူငယ်တစ်ယောက်ဆိုရင်ရော Candyက Candyပါလို့ အဖြေထွက်ပါ့မလား။
နောက်တစ်ချက်က အခုကိစ္စက အဆိုတော်မို့ ဘေးလူက ဗီဒီယိုရိုက်ထားလို့ မျက်ခွက်ရိုက်တဲ့ကိစ္စက လူတွေသိသွားတာ။ အကယ်၍သာ ဒီနေရာမှာ အခြားသူတွေသာဆို ဒီကိစ္စလည်း လူမသိနိုင်ဘူး။
ကိုယ်ကတော့ ဖြစ်တဲ့နေ့ကတည်းက ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီး နည်းနည်းမှ မကျေနပ်ဘူး။ မူးယစ်ဆေး ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အသာထား၊ မူးယစ်ဆေးပဲ ထားဦး… ခုခံနေတာမဟုတ်ဘဲ ရန်ပြုနေတာ မဟုတ်ဘဲ ရိုက်နှက်စရာအကြောင်း တစ်ပြားသားဖိုးမှ မရှိဘူး။
အခုလုပ်ပုံက မြန်မာပလာဇာ မျက်နှာစာလိုနေရာမျိုးမှာ သကြားလုံးဘူးလေး အိတ်ထဲထည့် ထိုင်နေရင်တောင် နေရင်းထိုင်းရင်း သတင်းအရဆိုပြီး ပါးဝင်ချဖမ်းပြီး အချုပ်ထဲ နှစ်ညထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘော ဖြစ်နေပြီ။
အခုက မူးယစ်ဆေးလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဖြေထွက်လာပြီ။ သတင်းအမှားပေးတဲ့ သတင်းပေးကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲ။ မသေချာဘဲ ဇွတ်ဖမ်းတဲ့ လူတွေရော၊ အထူးသဖြင့် ရိုးရိုးမဖမ်းဘဲ ရှယ်ဇွန်းတပ်ပြီး အခွက်ရိုက်ဖမ်းတဲ့ လက်စွမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးကရော ဘယ်လို အထူးတာဝန်ယူပေးမလဲ နားစွင့်ထားပါရစေနော်…
ခေတ်ကိုက ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်း သကြားလုံးက အော်တို ကက်တမင်းဖြစ်ပြီး မျက်ခွက်ရိုက် အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ခေတ်
မရတော့ဘူး… မတရားတွေ ကြည်ညိုနေပြီ
အာားးးးးးး ” ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါ
ပရိသတ်ကြီးလည်း မမပန် ရဲ့ စကားတွေနဲ့ သဘောတိုက်ဆိုင်ရင် မှတ်ချက်ကနေ တစ်ခုခုရေးသားပေးခဲ့ပါဦး ။
Source – အိ ပန်ဆယ်လို
Noe Noe May Ju Ju
ရဲကိုကိုမြားရဲ့ စောကျတလှဲလုပျရပျတှအေတှကျ တာဝနျယူဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ ပနျဆယျလို
အမြားကခဈြကွတဲ့ မမပနျဆယျလိုကတော့ ဖွိုးပွညျ့စုံတို့ ရောငျးရငျးတှဖေမျးဆီးခံရခွငျးအ တှကျ ခကျြကလြကျကြ ရေးသားပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
မမပနျက “အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံပါ သုံးဦးကို လှတျပေးလိုကျပါပွီတဲ့။ ဖမျးမိတဲ့ဆေးပွားတှကေ မူးယဈဆေးဝါး မဟုတျလို့ ဓါတုဗဒေဝနျရုံးက ပွနျကွားပါသတဲ့….
လှတျမွောကျလာပွီဆိုတဲ့အတှကျ အရမျးဝမျးသာပါတယျ။ မေးစရာ မေးခှနျးတှေ ရှိလာပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အပွဈရှိတယျ မရှိဘူး၊ မူးယဈဆေးဝါးဟုတျမဟုတျ မသခြောဘဲ သတငျးအရဆိုတာနဲ့ လူကွားသူကွားထဲ သောကျခှကျရိုကျပွီး ဖမျးလို့ရတယျပေါ့… အဲ့ကိစ်စကို ရှငျးပွပါ။
၁)လူမွငျကှငျးမှာ ဖမျးဆီးရုံတငျမဟုတျဘဲ မကျြနှာနဲ့ ခေါငျးကို ရိုကျပုတျချေါဆောငျခွငျး
၂)မူးယဈဆေးဟုတျမဟုတျ မသခြောဘဲ ရောငျးဝယျဖောကျကားပုဒျမအပါအဝငျ ပုဒျမတှတေပျခွငျး
ဒါတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျသူက တာဝနျယူမလဲ၊ ဘယျလို တာဝနျယူမလဲ။ မှားဖမျးတာ… ဆောရီးနျောဆိုတာနဲ့ ရမလား…
အခုကိစ်စက နာမညျကွီး အဆိုတျောဖွဈနလေို့သာ Candy က Candy ဖွဈတာ။ ဒါတောငျ အစက ကကျတမငျးဆေးပွားလို့ သတငျးတကျသေးတယျ။ အကယျ၍ ဖွိုးပွညျ့စုံနရောမှာ သာမနျမကျြနှာမှဲ လူငယျတဈယောကျဆိုရငျရော Candyက Candyပါလို့ အဖွထှေကျပါ့မလား။
နောကျတဈခကျြက အခုကိစ်စက အဆိုတျောမို့ ဘေးလူက ဗီဒီယိုရိုကျထားလို့ မကျြခှကျရိုကျတဲ့ကိစ်စက လူတှသေိသှားတာ။ အကယျ၍သာ ဒီနရောမှာ အခွားသူတှသောဆို ဒီကိစ်စလညျး လူမသိနိုငျဘူး။
ကိုယျကတော့ ဖွဈတဲ့နကေ့တညျးက ဗီဒီယိုဖိုငျကို ကွညျ့ပွီး နညျးနညျးမှ မကနြေပျဘူး။ မူးယဈဆေး ဟုတျတာ မဟုတျတာ အသာထား၊ မူးယဈဆေးပဲ ထားဦး… ခုခံနတောမဟုတျဘဲ ရနျပွုနတော မဟုတျဘဲ ရိုကျနှကျစရာအကွောငျး တဈပွားသားဖိုးမှ မရှိဘူး။
အခုလုပျပုံက မွနျမာပလာဇာ မကျြနှာစာလိုနရောမြိုးမှာ သကွားလုံးဘူးလေး အိတျထဲထညျ့ ထိုငျနရေငျတောငျ နရေငျးထိုငျးရငျး သတငျးအရဆိုပွီး ပါးဝငျခဖြမျးပွီး အခြုပျထဲ နှဈညထညျ့ထားလို့ရတယျဆိုတဲ့ သဘော ဖွဈနပွေီ။
အခုက မူးယဈဆေးလညျး မဟုတျဘူးဆိုတာ အဖွထှေကျလာပွီ။ သတငျးအမှားပေးတဲ့ သတငျးပေးကို ဘယျလို အရေးယူမလဲ။ မသခြောဘဲ ဇှတျဖမျးတဲ့ လူတှရေော၊ အထူးသဖွငျ့ ရိုးရိုးမဖမျးဘဲ ရှယျဇှနျးတပျပွီး အခှကျရိုကျဖမျးတဲ့ လကျစှမျးပွပုဂ်ဂိုလျထူးကွီးကရော ဘယျလို အထူးတာဝနျယူပေးမလဲ နားစှငျ့ထားပါရစနေျော…
ခတျေကိုက ကျောဖီဆိုငျထိုငျရငျး သကွားလုံးက အျောတို ကကျတမငျးဖွဈပွီး မကျြခှကျရိုကျ အဖမျးခံရနိုငျတဲ့ခတျေ
မရတော့ဘူး… မတရားတှေ ကွညျညိုနပွေီ
အာားးးးးးး ” ဆိုပွီးရေးသားထားတာပါ
ပရိသတျကွီးလညျး မမပနျ ရဲ့ စကားတှနေဲ့ သဘောတိုကျဆိုငျရငျ မှတျခကျြကနေ တဈခုခုရေးသားပေးခဲ့ပါဦး ။
Source – အိ ပနျဆယျလို
← မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးပြောလာခဲ့တဲ့ ဝေကြီး
သီတင်းကျွတ်ကန်တော့ရင်းနဲ့ မျက်နှာလေး ဆူပုတ်ပုတ်နဲ့ ကောက်တေးဖြစ်နေတဲ့ သမီးလေးကို စနောက်ပြီးချော့နေတဲ့ အေသင် →
သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာများလို့ သဘောထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှ လူကြမ်းမင်းသားများကို အလှူငွေနဲ့ ရိက္ခာများ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
TV ကြည့်ကောင်းနေရင် တခြားဘာကိုမှမမြင်တော့တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်ကြောင့် ဆွံ့အသွားခဲ့ရတဲ့ လင်းလင်း
“သူမကို မလှဘူးဆိုတာထက် မချစ်ဘူးလို့ပြောမှာကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့ မေမီကိုကို”
မွေးနေ့မှာ ပြုသမျှကုသိုလ်အကျိုးကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ တောင်းဆုပြုလိုက်တဲ့ ပိုပို
“အမြဲလို ဂရုစိုက် ချစ်ပေးတဲ့ ချစ်သူကြောင့် အရာရာကို ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ”
Copyright © 2020 Myannewsmedia. All rights reserved.